Isbaddalka Geeska Afrika: Eriteriya oo u gacanhaadisay Djibouti iyo Madaxweyne Geelle oo weli miiska ka maqan – Radio Daljir
Isbaddalka Geeska Afrika: Eriteriya oo u gacanhaadisay Djibouti iyo Madaxweyne Geelle oo weli miiska ka maqan
Seteembar 6, 2018 4:52 g 0
Saaka illa shalay waxaa Casmara ka socday kulan loogu magacdaray kulankii saddex geesoodka, ahaana mid u martigaliyey Madaxweynaha Eriteriya, Isaias Afwerki, ayna marti u ahaayeen Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, iyo Madaxweyne Farmaajo.
RW Abiy Axmed oo yimid galinkii hore ee shalay waxaa uu durba bilaabay booqashada dekedaha Eriteriya ee Casab iyo Masawac. Waxaa kale oo uu u kuurgalay dayactirka lagu wado dekedaha iyo waliba jidka isku xira Eriteriya iyo Itoobiya.
Galinkii danbe ee shalay waxaa yimid Madaxweyne Farmaajo. Cidna ma seegin in gegida diyaaraha Casmara ay Madaxweyne Farmaajo si wadajir ah u soodhaweeyeen Madaxweyne Afwerki oo uu weheliyo RW Abiy Axmed.
isla galinkii danbe waxaa la wada saxiixay heshiiyo aan faahfaahintooda warbaahinta lala qaybsan, looguna magacdaray heshiiska “xoojinta xiriirka dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo kan dhaqanka bulshada Geeska Afrika.”
Galinkii hore lama soo hadalqaadin Djibouti iyo welwelkeeda dhaqaale iyo kan ammaan iyo shakiga ay Djibouti ka muujisay isbaheysiga cusub ee Geeska Afrika.
Waaberigii saaka waxaa dib loo furay safaaraddi Itoobiya ee magaalada Casmara. Waxaa ku xigay dhidbidda “Guddi Sare” oo ka shaqeeya iskuxirka iyo meelmarinta heshiisyada.
RW Abiy Axmed waxa uu barqadii dib ugu laabtay Addis Ababa, waxaana kal iyo laab ku sii sagootiyey Madaxweyne Afwerki.
isla galinkii hore ee maanta waxaa Casmara ka duulay wafti uu hogaaminayo Wasiir Cismaan Saalax, Wasiirka Arrimaha Dibadda Eriteriya, kana kooban saddexda Wasiir Arrimo Dibadeed ee saddexda dal, ayaga oo isla markiiba ka degay Djibouti, lana dajiyey Hotel Kempenski.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo si kal iyo laab ah u soo dhaweeyey waftiga heer “Guddi Sare”, taageerayna isbaddalka xawaaraha ku socda ee Geeska Afrika, ayaa yiri, “waxaa la gaaray waqtigii Eriteriya iyo Djibouti ay nabad iyo xal waara heli lahaayeen. Imaatinka Wasiir Cismaan Saalax, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Eriteriya, bog cusub oo taariikhi ah buu maanta furay.”
Wasiir Maxamed Cali Yuusuf ayaa ku daray, “Geeska Afrika maanta hormar iyo isu-soo-dhawaansho ayuu ku naalloon karaa. Sida dhabta iyo daacadnimada wadata ee Eriteriya iyo Djibouti ay u muujiyeen nabad raadin waarta ayaa wixii harayna xalkooda loo helin doonaa.”
Wasiirka Warfaafinta Eriteriya, Md. Yemane Meskel, oo Casmara ku sugan ayaa isna isla markiiba sheegay in uu farriin ka helay Madaxweynaha Djibouti, asaga oo yiri, “Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu mahad ballaaran u jeediyey Madaxweyne Isaias Afwerki iyo Itoobiya iyo waliba Soomaaliya, asaga oo ka mahad-celiyey booqashada wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda dal. Madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in uu dib-u-heshiisiin iyo nabad waarta oo dhexmarta Djibouti iyo Eriteriya diyaar u yahay.”
Weli la isma weydiin doorka dekedaha Djibouti, doorka Imaaraadka Carabta, iyo sida ay Itoobiya u maareyn doonto xiriirka dhaqaale iyo kan ganacsi ee ay la leedahay Djibouti iyo kan hadda ay la yeelaneyso Eriteriya, oo ay hubaal tahay in mid faa’iidadiisu yahay kan kale khasaarihiisa.
Sidoo kale weli ma cadda doorka Soomaaliya ee ammuraha Geeska Afrika aan ka ahayn saxiixa heshiisyo aan weli faahfaahintooda la hayn.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19740
Daawo doorashada duqa degmada Bossaso iyo guusha Cabdisalaan Bashir (daawo)